Isiteshi Sokulahla I-Onyx SikaRoborock Sikwenza Konke Kubelula [Buyekeza] | Izindaba zegajethi
UMiguel Hernandez | 15/07/2021 14:00 | Kubuyekezwe ku- 17/07/2021 13:24 | Ukuzenzakalela kwasekhaya, Gadgets, Ikhaya, Izibuyekezo
Sisanda kuhlaziya lapha ifayela le- Roborock I-S7, umshini wokuhlanza amarobhothi nawo okhuhla futhi unikeze imiphumela emangalisa ngempela. Kuze kube manje, inani elingcono kakhulu lemali yamarobhothi esiyibuyekezile esiteshini. Kodwa-ke, ukukhawulela ukuphelela ngemininingwane emincane, iziteshi zokuzikhulula ziya ngokuya zidingeka.
URoborock wethule isiteshi esisha sokuzikhulula futhi sisihlaziye ngokujulile ukuze ubheke lesi sengezo seRoborock S7. Thola nathi ukuthi ukunakekelwa kwe-vacuum cleaner yakho kuncishiswe kangakanani futhi ungasisebenzisa ngokunenzuzo isikhathi ongasichithi uchithe konke okokusebenza.
Kuyinto enkulu Isithende se-Achilles yalolu hlobo lwamadivayisi, lapho uzothulula khona. Idiphozi inikela ngalokho ekunikezayo, futhi uma unezilwane ezifuywayo (njengoba kunjalo kimi) inikela ngokuhlanza okumbalwa kakhulu. Ngakho-ke, ngaso sonke isikhathi lapho ngifuna ukwenza kabusha iRoborock S7 yami, kufanele ngikhumbule ukuthi ngithulule ithangi layo noma cha. Lokhu manje kuzoba yinkinga ejwayelekile kakhulu sibonga kule divayisi esiyivivinyayo, lesi siteshi sokuzikhulula leso Roborock ivumelane ne-vacuum cleaner yayo esezingeni eliphakeme futhi ngokushesha iba ngomunye wabalingani bayo abakhulu.
1 Izinto zokwakha kanye nokuklama: Isitayela seRoborock
2 Izinhlelo zokuqoqa udoti nothuli
3 Ngokuxhumeka okuhlakaniphile
4 Okuhlangenwe nakho komsebenzisi
5 Ubuhle nobubi
Izinto zokwakha kanye nokuklama: Isitayela seRoborock
Isiteshi sokuzikhulula seRoborock S7, kungenzeka kanjani ukuthi kungenjalo, sinemibala emibili, emnyama nomhlophe, ehambelana nombala we-vacuum vacuum yakho. Inesisekelo esijwayelekile futhi esikhulisiwe ngandlela thile, ngendlela efanayo ene-cylinder system egcina ithangi nemoto yokudonsa. Kokunye konke, leli dokhu lenza imisebenzi efana ncamashi neziteshi zokushaja, okungukuthi, lingaxhuma irobhothi lakho emandleni ukuze liqhubeke nokushaja idivayisi.
Isisindo: 5,5 Amakhilogremu
Ubukhulu: 31.4 x 45.7 x 38.3 cm
Imibala etholakalayo: Mnyama nomhlophe
Inokubamba ikhebula ngemuva, ukuze ukwazi ukuyibeka ngokungaqondakali kunoma yisiphi isikhundla, into eyamukelekile kakhulu. Ngezansi inakho ukurhaba okusiza ukuthi idivaysi ikhuphuke irempu encane, ngendlela efanayo esebenzisa ngokunenzuzo ukuhlanza izikhonkwane zokushaja ngohlobo lwamabhulashi abekwe ngamasu kule njongo. Ngaphandle kokungabaza, sizoyixhumanisa nomkhiqizo kalula ngenxa yobukhulu bayo nokuklanywa kwayo, ngakho-ke kufana ngokuphelele nalokho ongakulindela kumlingani weRoborock S7.
Izinhlelo zokuqoqa udoti nothuli
Lesi sigaba sokuqala sibaluleke kakhulu, empeleni kimi sibonakala sibaluleke kakhulu yingakho sekuyisikhathi sokukhuluma kabanzi ngaso. Usuyazi vele ukuthi iningi lalezi ziteshi zokuthulula ngokuzenzakalela zidinga uchungechunge "lwezikhwama" ezivamise ukuba nomklamo wokuphathelene, nokuthi ngaphandle kwazo abasizi ngalutho. Kodwa-ke, lesi siteshi esizidelayo seRoborock S7 sikuvumela izindlela ezimbili zokususa nokugcina ukungcola:
Ethangini le-hermetic ngohlelo lokudonsa i-cyclonic
Esikhwameni esikhwameni se- «dust catcher»
Ngokuphumelelayo, Kungasetshenziswa noma cha ukusebenzisa i-Roborock S7 tank bag kuyindlela. Yize kuliqiniso ukuthi lesi sikhwama senzelwe uthuli futhi sisivumela ukuthi sikhiphe isiteshi ngaphandle kokukhipha ithangi, akuyona into ebalulekile.
Isikhwama sothuli sinamandla angu-1,8 litres futhi ivala ngokuzenzakalela. Sikubeka endaweni engenhla sisebenzisa umhlahlandlela wamakhadibhodi bese siyikhipha ngesingezansi lapho sibeka uphawu. Lesi sikhwama sinemithi elwa namagciwane ukuqinisekisa njalo imvelo ehlanzekile.
Ngaphandle kwalokhu, ungaya ngqo ekwakhiweni kwesiphepho esiningi (ngamaphoyinti ayi-15) ngejubane elihlukahlukene elizokuvumela ukuthi ukhiphe ithangi leRoborock S7 kalula. Sinamandla amane kuya ngomsindo nokusetshenziswa kwamandla esikulinganisela:
Ngincoma okuphezulu, noma ngabe umsindo ungakhuphuka ngaphezu kokujwayelekile, nakhu okubalulekile ukukhipha irobhothi ngendlela efanele, futhi yilokho okwenzayo. Leli thangi linokuhlunga okujwayelekile nezinye izihlungi ezimbili eziqinisekisa uphawu oluphelele ukuze uthuli lungaphunyuki. Akusho ukuthi zonke lezi zihlungi zingasuswa futhi zingahlanzwa kalula ngaphansi kompompi, yize isivivinyo sethu besingakafiki isikhathi eside njengaso. Uma kwenzeka sikhetha ukukhipha konke ngohlelo lokudonswa kwamasilinda amaningi, sizoba nethangi elingu-1,5 litre, elithe ukwehla kancane kunalelo lesikhwama sokubamba uthuli.
Umthamo wamathangi ungamasonto amane
Ukuhlanganiswa kwabo bonke lobu buchwepheshe kwenza kube yithuluzi elehlukile, ngoba azisekho izinhlelo zokuchitha imishini yokuhlanza irobhothi evumela ukuthi kokubili isikhwama nethangi elilinganiselwe ukuthi lisetshenziswe ngokungafani. Ngakho-ke, ngokubhekisisa okungenhla, ithole izitifiketi ezahlukahlukene kwa-TÜV Rheinland maqondana nokwenza ngcono izimo zokuphila kwabaguliswa yimizimba.
Kungenzeka kanjani ukuthi kungenjalo, isiteshi sokuzikhulula seRoborock S7 sixhuma nohlelo lweRoborock ngamagama afanayo ne-vacuum vacuum. Ngokomqondo, kuthatha i-algorithm eyenziwe ngumkhiqizo ukuvumelanisa ukukhishwa kuzidingo zemikhuba yokuhlanza yomsebenzisi, kepha angikaze ngibone umehluko omkhulu kakhulu. Singayilawula inqubo namandla okususa kalula ngohlelo oluhlanganisa kahle, kuliqiniso ukuthi nathi asiphuthelwa imisebenzi eminingi.
Njengoba kwenzeka ngaleso sikhathi ngeRoborock S7, ulwazi engilunikwe yisiteshi esisha sokuqothula ngokuzenzakalela lube luhle kakhulu. Ngokwami, ngincamela uhlelo lokukhipha ama-cyclonic ethangini ukuze ngigweme ukudala ukungcola okwengeziwe ngesikhwama nokunciphisa ukunakekelwa, noma kunjalo, kwenza kube lula ukususa ukungcola ngokusebenzisa izikhwama zakho ezivaliwe kahle.
Irobhothi sethulwe ngentengo ukuthi cishe ama-euro angama-299, ingathengwa kusuka manje ku-Geekbuying, yize kulindeleke ukuthi ifinyelele ezindaweni ezijwayelekile zokuthengisa kungekudala. Ukuthi kufanelekile noma cha ukutshala imali ukugwema ukukhishwa njalo, ngikushiyela ezandleni zakho.
Ukuzichitha kukaRoborock S7
Kuthunyelwe ku: 15 de julio de 2021
Imisebenzi eminingi enesikhwama noma ithangi
Ukusetha okulula ukwakhiwa okuhle
Umsindo ungaba ngokweqile
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » I-Onyx Dump Station kaRoborock yenza kube lula [Buyekeza]
Ukuhlaziywa kweshaja ye-AUKEY LS02 smartwatch ne-Aircore 15W